WhatsApp အတွက်စတစ်ကာများကိုအဆင့်ဆင့်နှင့်အလွန်ရိုးရှင်းစွာဖန်တီးပါ Androidsis
အကယ်၍ သင်သည် WhatsApp မှဖြစ်ပြီး၊ သင်လိုအပ်သောနောက်ဆုံးပေါ် Beta ဗားရှင်းကိုတပ်ဆင်ထားပါက WhatsApp ၏နောက်ဆုံး version), သင်ဤ link မှတိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်သောဗားရှင်းသင်သတိပြုမိလိမ့်မည် ဒီလုပ်ဆောင်ချက်အသစ်ကိုစတစ်ကာများပို့ရန်ထည့်သွင်းထားသည်, ထိုအကြောင်းပြချက်ကြောင့်ပင်သင့်ကိုအလွန်ရိုးရှင်းသောနည်းဖြင့်သင်ပေးမည့်လက်တွေ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာတစ်ခုကိုယနေ့ကျွန်ုပ်ယူလာသည်။ WhatsApp အတွက်ကိုယ်ပိုင်စတစ်ကာများဖန်တီးပါ.
ပြီးပြည့်စုံတဲ့လက်တွေ့ကျသင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Android အတွက်အခမဲ့ application တစ်ခုကိုတပ်ဆင်ခြင်းဖြင့်၎င်းအားကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီလိမ့်မည် ခြစ်ရာကနေသို့မဟုတ်မည်သည့်ပုံရိပ်မှမဆိုကိုယ်ပိုင် Stickers တွေဖန်တီးပါ ငါတို့ Android စက်တွေရဲ့မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့
ပထမဆုံးလုပ်ရမှာကနာမတော်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အခမဲ့ application ကို download လုပ်ပါ WhatsApp အတွက်စတစ်ကာများဖန်တီးပါဂူးဂဲလ်၏ကိုယ်ပိုင် Play စတိုးဖြစ်သော Android အတွက်တရားဝင်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုမှကျွန်ုပ်တို့တရားဝင်ရနိုင်သည်။
ဤလိုင်းများအောက်တွင်ကျွန်ုပ်သည် Android အတွက် Google application store မှအခမဲ့ download ရယူရန်တိုက်ရိုက်လင့်ခ်ကိုချန်ထားသည်။
1 Google Play Store မှ WhatsApp အတွက် Create Stickers ကိုအခမဲ့ရယူပါ
2 WhatsApp Stickers ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သောလိုအပ်ချက်များ
3 WhatsApp အတွက်ကိုယ်ပိုင်စတစ်ကာများဖန်တီးနည်း
3.1 WhatsApp ၏လုပ်ဆောင်မှုအတွက်စတစ်ကာများဖန်တီးပါ
Google Play Store မှ WhatsApp အတွက် Create Stickers ကိုအခမဲ့ရယူပါ
ရေးသားသူ: Didi ထုတ်ကုန်များ
WhatsApp Stickers ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သောလိုအပ်ချက်များ
လိုအပ်သောတစ်ခုတည်းသောလိုအပ်ချက်မှာ WhatsApp ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းဖြစ်သည်, beta အခြေအနေတွင်မူကွဲတစ်ခုရှိသေးသော်လည်း၎င်းသည် application မှစတစ်ကာများပို့ရန်အခွင့်အလမ်းရှိပြီးဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည် Beta Tester အသုံးပြုသူမဟုတ်ပါက၎င်းကိုပြင်ပ၌ရယူနိုင်ပါသည် ဒီတူညီတဲ့ link ကိုနှိပ်လိုက်ရင်.
ဤအရာ၏လုပ်ငန်းစဉ် WhatsApp ကိုများအတွက်စတစ်ကာများ ငါဒီ post ရဲ့အစမှာမင်းကိုချန်ထားခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာအသေးစိတ်ရှင်းပြပါမယ်။ ဒီလောက်လွယ်လွယ်ကူကူကလေးတစ်ယောက်တောင်မျက်လုံးပိတ်ပြီးလုပ်နိုင်တယ်၊ အောက်မှာငါစာရင်းပြုစုတော့မယ်။ WhatsApp အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ပိုင်စတစ်ကာများဖန်တီးရန် application ကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသောရွေးချယ်မှုများ -
ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ၏ပြခန်းတွင်ရှိသောမည်သည့်ဓာတ်ပုံကိုမဆို WhatsApp အတွက်စတစ်ကာတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
စာသားများ၊ စတစ်ကာများ၊ စတစ်ကာများ၊ ဓာတ်ပုံများစသည်ဖြင့်စတစ်ကာများကိုခြစ်ရာမှဖန်တီးနိုင်ခြင်း။
ပတ်ပတ်လည်စတစ်ကာများကိုဖန်တီးရန် function ကို။
ကျနော်တို့ဖြတ်တောက်ခြင်း, လှန်ခြင်း, filter များ, စတစ်ကာများ, စာသားကိုသုံးနိုင်သည်နှင့်အတူအယ်ဒီတာအပြည့်အဝ ......
WhatsApp အတွက်စတစ်ကာ ၃၀ ကိုကျွန်ုပ်တို့လုံးဝအခမဲ့ဖန်တီးနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ WhatsApp အကောင့်သို့တချက်နှိပ်ရုံဖြင့်ပေးပို့ခြင်း။
WhatsApp အတွက်ကိုယ်ပိုင်စတစ်ကာများဖန်တီးရန်အလွန်လွယ်ကူပြီးလွယ်ကူသည်။ WhatsApp အတွက်ဤစတစ်ကာများဖန်တီးရန်အသုံးပြုမည့်ဓါတ်ပုံများကိုရွေးချယ်ခြင်းနှင့်တည်းဖြတ်ခြင်းတွင်သင်တို့၏အရည်အသွေးသည်အလွန်အရည်အသွေးပေါ်မူတည်သည်။.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » WhatsApp အတွက်စတစ်ကာများကိုအလွယ်တကူမည်သို့ဖန်တီးရမည်နည်း